gabadha ka shaqeynaysay Xafiiska Rooble ee ku dhimatay qaraxa
Saturday September 25, 2021 - 13:50:55 in Wararka by Mogadishu Times
"Ilaah ha u naxariisto Hibaaq Abukar oo ka tirsaneyd Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, oo ka mid ahayd dadkii saaka ku dhintay weerar bahalnimo ah oo argagixisadu ay ka sameeyeen bar koontorool oo ku taala Isgoyska Ceelgaab.” Ayuu yiri Afhayeenka oo warkan ku sheegay bartiisa Facebook.
"War aad looga naxo ayaa ka imaanaya Muqdisho. Hibaaq waxay ahayd hormuudka dhabta ah ee xuquuqda haweenka. Tacsi tiiraanyo leh ayaan u direynaa qoyska Hibaaq. Waa khasaare weyn oo soo gaaray Somaliya.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Safaaradda.
Shabaabka hubeysan ee dalka ka dagaalama ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxan